ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဖက်ရှင်နွေရာသီဆင်မြန်း - နွေရာသီအဘို့အရှည်လျား MIDI, ညဦးနှင့်လူငယ်, ကောင်းကင်ဘားနဲ့ high-ခါးနှင့် oversayz ဖြစ်ရပ်မှန် T-ရှပ်အင်္ကျီနှင့် hoodie
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်နွေရာသီဆင်မြန်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအဘို့အအလှဆုံးနဲ့အဆင်ပြေအဝတ်အစားတွေ
ကလေးအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ - တဲ့အံ့သြဖွယ်အချိန်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူ အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှု၏ ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူ၏ပုံမှန်အတိုင်းအသက်တာ၌တစ်ခုခုပြောင်းပေးဖို့ရှိပါတယ်သောအခါအဖြစ်ပျက်များနှင့်ကြိမ်။ ဤသည်ကိုလည်းဗီရိုသက်ဆိုင်သည်။ ပူပြင်းရာသီအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ကယျတငျတျောမူသောနွေရာသီဆင်မြန်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆင်မြန်း - နွေရာသီ 2017
ကလေးတစ်ဦး၏နှလုံးဝတ်ထား - ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များအရှုံးမပေးဖို့မအကြောင်းပြချက်, အမြောက်အများအိတ်မှထိန်း။ ဒီဇိုင်နာများအပြည့်အဝမှာလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုအကွာအဝေးအတွင်းတောက်ပနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်လက်မိခင်များ expectant ဖို့ဆန္ဒထောက်ခံပါတယ်။ အတူအလင်းလက် trendsetters စိတ်ချလက်ချရက်အပေါ်နှင့်လမ်းလျှောက်ပေါ်တွင်ရုံးနှင့်အိမ်တွင်ဝတ်ဆင်နိုင်သူကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, များအတွက်နွေရာသီဆင်မြန်းအမျိုးမျိုးဖန်တီးပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနွေရာသီ 2017 ဘို့ဖက်ရှင်ဆင်မြန်းလက်ရှိရာသီ၏လတ်တလောခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုထင်ဟပ်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူတို့အလင်းစီးဆင်းနေသော, ပျော့ပျောင်းသောမြော်လင့်မိခင်အများဆုံးအဆင်ပြေခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း။ ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများများအတွက် 2017 နွေရာသီဆင်မြန်းအောက်ပါဒေသများသို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်:
ပစ္စည်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်ဂျာစီပျော့နှင့်နေ့စဉ် wear များအတွက်အဆင်ပြေသည်။
Draping, pleats ခြံ - အခြားလမ်းကြောင်းသစ်ဒီနှစ်။ ဤရွေ့ကားအလှဆင် element တွေကိုအများဆုံးနှစ်သိမ့်များအတွက်စားဆင်ယင်ပုံသဏ္ဍာန်အောက်မှာ fit မှစက်ချုပ်ခွင့်ပြုပါ။
နွေရာသီ 2017 ဘို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆင်မြန်း
အမြိုးသမီးမြားဆက်ဆက်ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးသို့နစ်မြုပ်သူ၏ "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့" အနေအထား, ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါတစ်ဦးကအချိန်။ ယနေ့မြော်လင့်မိခင်ရုပ်မရှိဖြတ်မှုအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်နွေရာသီအတွက်ချစ်ခင်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအအခြားသူတွေအတွက်ဒါကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘို့အဆင်မြန်း၏ခေတ်သစ်စတိုင်များဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုးနှင့်အရသာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဘဝတှငျအမြားဆုံးထိထိမိမိအပေါက်၏ transience အလေးပေးနိုင်အောင်ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့ရှေးခယျြထားရပါမည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုအများကြီးစကားပြောဆိုပါက, ဒါကြောင့်အပေါက်ကိုယ်ပိုင်ဗီရိုလုပ်နိုင်တဲ့စွန့်ခွာရန်နှင့်အောက်ပါမော်ဒယ်များတက်ဖြည့်သင့်တယ်:
oversayz / အင်္ကျီ;
ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအလယ်၌ပေါ်ထွက်လာတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြတ်ပုံအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်နှင့်ဆူဖြိုးခါးကနေအာရုံဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဖက်ရှင်အကြားနေတုန်းပဲရေပန်းစားသည်။ နွေရာသီအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘို့ဤစားဆင်ယင်လုံးဝလှုပ်ရှားမှုများကိုမျှော်မိခင်ချကျင်းပရန်နှင့် tummy ၏မလွှဲမရှောင်တိုးတက်မှုနှုန်းကောင်းတစ်ခုထောက်ပံ့ရေးရှိပါတယ်မပေးပါ။ တစ်ဦးက silhouette အလားတူဖြတ်တဲ့အင်္ကျီနဲ့ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ရုံးစတိုင်နွေရာသီအဘို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လွင်ပြင်စားဆင်ယင်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ကလေးမင်းသမီးတစ်ဦးလမ်းလျှောက်လိုအပ်, ဒါကြောင့်ကမ်းနားတလျှောက်လမျးလြှောကျသှားခွငျးသို့မဟုတျပန်းခြံ, သင်ကဒီမိုကရေစီထုတ်ကုန်ရှေးခယျြနိုငျမျှော်လင့် ပုံနှိပ်နှင့်အတူ နဲ့တောက်ပ finish ကို။ ဒါဟာတိုတောင်းရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားကဲ့သို့ဝတ်စားဆင်ယင်ကျော်ရသောအထူးကျက်သရေကို dual မော်ဒယ်ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကွာ tummy မှအာရုံဆွဲယူနှင့် silhouette ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Oversayz နွေရာသီဝတ်စုံ
လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်း oversayz အတော်လေးမိသားစုတစ်ဦးအမြန် replenishment မျှော်လင့်ခြင်း, ဗီရိုမိန်းကလေးကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့စတိုင်အဝတ်အများစုထုတ်လုပ်သူအခမဲ့လြှံနှင့်အတူကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဖက်ရှင်နွေရာသီဆင်မြန်းသူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုထဲတွင်ပါဝင်သည်။ soft ဂျာစီကိုခန္ဓာကိုယ်မှသာယာသောသည်နှင့်ဿုံဆန့်, ဒါတတိယသုံးလပတ်သင်ဆဲစတိုင်မတ်မတ် flaunt နိုင်ပါတယ်။ Oversayz brevity လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်, ရယ်စရာကိုကြည့်နေတဲ့ရိုးရှင်းသော finish ကိုအတူအဝတ်ကိုရှေးခယျြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကမီးမောင်းထိုးပြ, ဥပမာတစ်ခုအချိုးမညီဘော်လီများနှင့်အနားတစ်ဖြတ်ထားရှိရေးလိမ့်မည်။
ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောဒဏ်ငွေပေါက်ဘို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သမျှသောစတိုင်များ၏ဣတ္ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွခါး, ညင်ညင်သာသာ, သင့်အစာအိမ်အပေါ်ဖိအားပေးနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပုံ၏ကောက်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကဖြတ်လမ်းဘော်လီကြီးမားသောရင်သားအလေးပေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ဤအပိုငျးခဲထူးချွန်လျှင် ruffles နှင့် drapes နှင့်အတူမော်ဒယ်၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။ နွေဦး၏အဆုံးအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလှပသောနွေရာသီစားဆင်ယင်ကောက်ရန်လွယ်ကူသည်:
အမြောက်အများအတွက်အပိုစတော့ရှယ်ယာများအတွက်ခါးမှာ pleats အတူ။
ခေတ်သစ်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းကိုယ်ဝန်၏နောက်ဆုံးလကြာသည်အထိတက်ကြွစွာနှင့် fruitfully လက်တွေ့ကျကျမှကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များခွင့်ပြုပါ။ နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဘဝအထူးဖြစ်ပါသည်, ဤအချိန်ပေမယ့် စားဆင်ယင် code ကို ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနေအထား၌နေသောသူတို့အဘို့, ဖျက်သိမ်းရသေးပါ။ စုံလင်သောစတိုင် - နေ့စဉ်ရုံး၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုသို့ကိုက်ညီသည့်စားဆင်ယင်-up, box ကို။
low-key ကိုအရောင်များ, ချောပုံနှိပ်, ကြော့ဖြတ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ သဘာဝအထည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စံပြ option ကိုများအတွက်နွေရာသီဆင်မြန်းစေသည်။ သို့သော်ပုံမှန်ထက်ပါးလွှာ silhouette ထံမှကွဲပြားခြားနားနေသောခေါင်းစဉ်:
သက်သာခြင်းနှင့်အနံ့နှင့်အတူလျောက်ပတ်သို့ချုပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘို့များစွာသောစတိုင်နွေရာသီဆင်မြန်းရဲ့ width ဆုံး၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်။
တက်ကြွစွာဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ draping, pleats နှင့် elastic INSERT ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
နွေရာသီမှာတော့မှောင်မိုက်အရောင်များကိုမသုံးကြဘူး - ပန်းခရမ်းရောင်, အပြာ, စိမ်းပြာရောင်, ဒါမှမဟုတ်ပူစီနံရုံးထဲမှာအညီအမျှကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။
ပေမယ့်-hoodie စားဆင်ယင်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုတစ်ခုကြီးမားအိတ်ဒီဇိုင်နာများလက်ရှိနှစ်၏အရှိဆုံးဒီကဗျာခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီစတိုင်အပေါ်အလောင်းအစားလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းသတိရတတ်၏။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ခန္ဓာကိုယ်အစာအိမ်ကြွင်းသောအရာမပြောင်းလဲရှိနေဆဲ မှလွဲ. အရာအားလုံးသူသာမိန်းကလေးငယ်များလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့စတိုင်ခံစားရတယ်။ ခံစား စတိုင်နှင့်ဖက်ရှင် , အဆိုပြုထားရွေးချယ်စရာတွေထဲကမှ preference ကိုပေး:
ကမ်းခြေအဘို့, သငျသညျပွင့်လင်းပခုံးနှင့်အင်္ကျီလက် razletaykami နဲ့အလင်းစထည်တစ်ခုမော်ဒယ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အချိုးမညီအနားအရှည်နှင့်အတူ tunics ဆင်တူ nice ဆင်မြန်း။
ဖက်ရှင်များ၏လှိုင်းတွင်ယခုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရှည်လျားနွေရာသီဆင်မြန်းသည်။ သူတို့တစ်တွေခါးပတ်အနိုင်ရရှိလျှင်, သင်အသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ silhouette ရ။
တစ်ဦးအတော်လေးအသစ်စားဆင်ယင်-ရှပ်အင်္ကျီကိုလျင်မြန်စွာဖြစ်လာခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ် သည့်ဗီရိုအရာများ၏အခြေစိုက်စခန်း ။ ဒါဟာအနည်းငယ်ဖြေလျော့ပေးခြင်းပေါ့ပေါ့စတိုင်ဿုံကိုက်ညီ။ အမြင်အာရုံ, ဒီမတ်မတ်သာတိုးချဲ့တစ်ရိုးရှင်းသောတီရှပ်နဲ့တူလှပါတယ်။ ယင်း၏စုံစုံဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖော်ပြဆက်စပ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်, ဒီမော်ဒယ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အရှည်သင့်ရဲ့ preference ကိုပေါ် မူတည်. တစ်ဦး mini ကို, MIDI သို့မဟုတ် Maxi နိုင်ပါတယ်။
စားဆင်ယင်-ရှပ်အင်္ကျီ၏အထက်ပိုင်းတစ်တံဆိပ်ခေါင်းတူသောပါးလွှာကိုဖန်ဆင်းကြိုး, ဒါမှမဟုတ်ထူနေသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဘို့ကောင်းသောဖက်ရှင်ပုံနှိပ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်လွင်ပြင်, အတူနွေရာသီအဘို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်လူငယ်များအတွက်ဂျာစီတွင်ဆင်မြန်း၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တောက်ပထည်အလှဆင် paillettes သို့မဟုတ် strass ကနေဖွဲ့စည်းထား, ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များပွဲလမ်းသဘင်ပုံရိပ်တွေအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
မနေ့ပှဲတှငျပါဝငျဖို့ငြင်းဆန်ရန်အကြောင်းပြချက် - ကလေးပေါ်ပေါက်ရေးကိုစောင့်နေပါသည်။ တစ်ဦး chic image ကိုဖန်တီးပါအများအပြားအမှတ်တံဆိပ်ထွက်ဘို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များမူရင်းမတ်မတ်၏တစ်ခုလုံးကိုစုစည်းရာပူဇော်သက္ကာကိုပြုလုပ်မှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသောကြောင့်, ဒါကြောင့်မခက်ခဲသည်:
အင်ပါယာစတိုင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးမော်ဒယ်များနွေရာသီဆင်မြန်း - ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အပါဆုံးအံ့မခန်းမူကွဲတဦး။ အခမဲ့စီးဆင်းနေသောလှိုင်းတံပိုးအဝတ်, စီးသောလိုင်းများနှင့်လှပသောဘော်လီမတန်တဆခါးတွန်းလှန်၏အနေအထားအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမှန်ကန်စေသည်။
ပခုံးလိုင်းနှင့်အတူလှပသောဖက်ရှင်မိန်းမ, အခွင့်အလမ်းကိုယူမယ့် fluffy အင်္ကျီနှင့်အတူတစ်ဦးရဲရင့် strapless စားဆင်ယင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မည်သည့်အားလပ်ရက်များအတွက်ထိရောက်သောရွေးချယ်မှု - Trapezoidal ဇာသို့မဟုတ် guipure ၏အင်းလေး, ဒါမှမဟုတ်ချောင် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူအလှဆင်, စားဆင်ယင်ခုတ်ဖြတ်။
ကြမ်းပြင်၏အရှည်သည်ယနေ့ - ပြည်နယ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများဗီရိုထဲမှာသဟဇာတဖြစ်သည့်တစ်ဖက်ရှင် hit ။ ဒါဟာညနေခင်းဝတ်စုံနှင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည်စံပြအဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဣတ္နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနွေရာသီအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဘို့အတာရှည်ဆင်မြန်းသည်, ကိန်းဂဏန်း၏ရှုံးသောအခါခြမ်းဖုံးကွယ်နှင့်ခံစားရရန်လွယ်ကူအောင် ပိုပြီးယုံကြည်မှု ။ ဒီဇိုင်နာများကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအရှည်၏အောက်ပါစတိုင်များ၏မှတ်စုယူပူဇော်:
အပူအဘို့စံပြကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ chiffon များအတွက်အလင်းနွေရာသီစားဆင်ယင်,
မော်ဒယ်တိုတောင်းသောရှေ့နှင့်ရှည်လျားသောနောက်ဘက် - ရထားနှင့်အတူ;
ဇာအင်္ကျီ - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့အရှိဆုံးဖက်ရှင်လမ်းကိုဖန်တီးရန်
ဆလရီ၏ဟင်းလျာများ - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမြစ်များချက်ပြုတ်စိတ်ကူးများနှင့်အဓိကအားထား
Mascot scarab ပိုးအဓိပ္ပာယ်
Atrial Fibrillation - ကုသမှု
Meghan Markle ပထမဦးဆုံးမင်းသားဟယ်ရီနဲ့သူ့ရဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုပြောသည်
Agri ကလေးများ - မိဘများသိရန်လိုအပ်သည့်အပလီကေးဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို